Liibaan Axmad: Miyay Soomaaliya Leedahay Bulsho Rayid ah? – Radio Daljir
Seteembar 28, 2017 1:51 g 0
Labada erey – bulshada rayidka – waxay ku soo biireen saaxadda siyaasadda Soomaalida kaddib 1991kii, sanadkii dowladdii dhexe ay burburtay. Markii uu socday shirkii dib u heshiisiinta oo ay dowladda Jabuuti abaabushay sanadkii 2000, “bulshada rayidka” Soomaalida waxaa loo arkay inay udub dhexaad u ahayd dadaalladii dib loogu dhisayay dowladnimada Soomaaliyeed. Macnaha ereyga rayid wuxuu inta badan ku xigaa ereyga dowlad gaar ahaan marka laga hadlayo maamulkii askartu afgambisay 1969kii (tusaale ahaan dowladdii rayidka ).
Qeexista kowaad oo ay bulshada rayidka ihi yeelatay waa: dad aan qabqableyaal dagaal ahayn.
Katuni Consult, oo ah shirkad cilmibaariseed oo fadhigeedu yahay Nayroobi, ayaa soo saartay warbxin ku saabsan bulshada rayidka Soomaalida. Maqnaanshaha qeexis cad oo ku saabsan ‘bulshada rayidka ah’ wuxuu saamayn ku yeelanayaa isla xisaabtanka. Joakim Gundel iyo Sean Allen, oo warbixinta qoray, waxay ku doodayaan in arrimaha ku saabsan siyaasadda Soomaalida ay gacanta ugu jiraan fulinta (madaxtooyada), sharci-dejinta (barlamaanka) iyo deeq-bixiyeyaasha. Gundel iyo Allen waxay ku doodayaan in ururrada Soomaalidu u samaysmeen laba hab: (a) hab heer tuulo ah oo ku salaysan iskaa-wax-u-qabso ama kooxo xiriir la leh beesha awoodda ku leh tuulada iyo danaheeda (2) kooxo fadhigoodu magaalada yahay, sida hey’adaha dowladda ka madax-bannaan (NGO) iyo machadyo cilmibaariseed oo dad indheergarad ihi oo dalka iyo dibedda jooga ay abaabuleen. Ururradani may ka duwana dowladda adeegyada ay qabtaan awgood. Ururro badan oo dowladda ka madax-bannaan iyo ururro beeleedyo badan oo la sameeyay labaatankii sano oo ugu dambeeyay ayaa ah kuwo aan sii socon karin ama aan sharciyad ka haysanin meesha ay ka jiraan. (Waa inaynu fiiro gaar ah u yeelanno labada macne oo uu ereyga beel ku leeyahay af Soomaaliga – dad meel xaafad ama tuulo wada degggan; dad wadaaga hayb qabiil. Gundel iyo Allen may caddaynin tan ay ka wadaan) marka ay adeegsadeen ereyga beel (community). Ururradan waxaa wada hindiseyaal iyo maalgelin shisheeye halkii ay isbeddel-sameeyeyaal iswada ( self-driven changemakers ) wadi lahaayeen . Qoreyaashu waxay ku tilmaameen ururrada noocan ihi “ururro dowladda ka madax-banaan oo shandad lagu sito (briefcase NGOs)”. Waa ururro ay maamulaan dhowr qof oo ujeeddadoodu tahay inay faa’iido sameeyaan. “Ku tiirsanaanta dhowr qof waxay keentaa madhnaan awoodeed, marka dambena burbur”.
Gundel iyo Allen waxay u kuurgaleen 75 urur oo dowladda ka badaxbannaan oo Muqdisho ka shaqaynayay, iyo labaatan ka shaqaynayay Kismaayo sanadkii 2013kii. Sanadkii 2015kii konton urur baa ka haray kuwii Muqdisho ka shaqaynayay; 12 urur waxay ka hareen kuwii Kismaayo ka shaqaynayay. “Qeexista ballaaran ee ereyga ‘bulsho rayid’ tilmaamaysana kooxo bulsheedyada ( qabiillada ) ka madax-bannaan dowladda waa mid keeni karta halista ah in ereygu macno-beelo marka Soomaaliya laga hadlayo” bay qoreyaasha warbixintu ku doodeen.
Tilmaanta ay bulsho rayid ihi yeelanayo waa sidan: “jileyaal wadareedyo (collective actors) (kooxo; looma baahna shaqsiyaad ) si is-xilqaamid ah loo sameeyay oo xubinnimo loogu soo biiro oo ka madax-bannaan hey’adaha kale, sharciyaddooduna ku salaysan tahay inay wax qabtaan ama is-abaabulaan si ay u gaaraan ujeeddo ama wakiil uga noqdaan dano guud oo aan ahayn dan gaar loo leeyahay”. Qeexistani waa midda ay istaraajiyadda Midowga Yurub iyo Wasaaradda Horumarinta Caalamiga ee Biritayn ku qotonto.
Qoreyaasha warbixintu waxay rumaysan yihiin in laba qaybood oo bulshada Soomaaliyeed ka mid ihi ay bulsho rayid ah sal u noqon karaan: oday dhaqameedyada iyo ururrada xirfadlayaashu ama ganacsatadu xubno ka yihiin.
Dhinaca madax-bannaanida bulshada rayidka Soomaaliyeed may ka duwana ururradii bulshada ee dowladdii kacaanka (ururkii dhallinyarada, ururkii haweenka iyo ururkii iskaashatooyinka). Sahanka Katuni Consult ay samaysay wuxuu ku koobnaa bulshada rayidka ah iyo jileyaal bulsheedka (societal actors). Qoreyaashu way ogaan kari lahaayeen sida Soomaalidu u aragto bulshada rayidka ah. Way adag tahay inay oday dhaqameedyadu sal u u noqdaan samaynta bulsho rayid ah oo sees adag leh sida ururro ka madaxbannaan dowladda iyo suuqa wax lagu kala iibsado ama adeegyada laga fuliyo. Oday dhaqameedyadu may ka madax-bannaana siyaasiyiinta. Soomaalidu way yeelan kartaa bulsho rayid ah oo guntan u qareemid (advocacy) ku salaysan arrimo badan oo taagan sida xuquuqda dadka laga tiro-badan yahay; waxbarashada gabdhaha; kobcinta garashada la xiriirta isbeddelka cimilada iyo la dagaallanka sinnaan-darrada dhaqaale (inequality). Howlahani waa tubta loo mari karo samaynta bulsho rayid ah oo leh tilmaamaha ay Katuni Consult soo jeedisay.
Qormooyinka Daljir 54 Wararka 25377